Jwell Twin screw -free Vent PET Sheet Extrusion Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Jwell Twin screw-free Vent PET Sheet Extrusion Line
Oge: 2019-04-29 Hits:
Jwell wepụtara ahịrị yiri ibe extrusion extrusion maka mpempe akwụkwọ PET, ahịrị a nwere sistemụ degassing, na enweghị mkpa ihicha ya na kristal. belata mfu viscosity nke resin PET, ihe nlebara anya na nke nwere mgbidi dị larịị na-eme ka mmetụta jụrụ oyi dịkwuo mma ma melite ike na ogo mpempe akwụkwọ.Multi components dosing feeder nwere ike ịchịkwa pasent nke ihe na-amaghị nwoke, ihe nrụgharị ihe na ọkwa nna ukwu nke ọma, mpempe akwụkwọ ahụ bụ ejiri ọtụtụ ebe maka ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa thermoforming.
APET, PETG, CPET otu-akwa ma ọ bụ ahịrị extrusion mpempe akwụkwọ nwere ọtụtụ
Ọ bụ otu n'ime ahịrị mmepụta kachasị dị elu na teknụzụ tozuru oke na nkwụsi ike na China. E jiri ya tụnyere ụdị akụrụngwa ndị ọzọ, ọ karịrị 30% karịa na arụmọrụ niile.This a dabara adaba maka PS, PP, PE.
PETG mpempe akwụkwọ
A na-akpọ PETG PET okpomọkụ dị ala, ọ bụ ihe ngwugwu gburugburu ebe obibi nwere njirimara dịka njiri mara mma, ezigbo nghọta, ihe mgbochi dị mma, nrapado onwe onye, ​​nke a na-eji maka njikọ gluu na nhazi ugboro ugboro.
Mpempe akwụkwọ CPET
CPET bụ ụdị PET gbanwere, nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ, a na -ejikarị ya maka ngwugwu na oven microwave.
PITA stereoscopic ngwa anya ji kpachie oghere mpempe akwụkwọ
Enwere ike iji ya dị ka ngwugwu ọkwa kacha elu maka ịchọ mma, ọgwụ, ụtaba & mmanya na ngwongwo ndị a na -ahụkarị dịka ngwa ụlọ, mgbasa ozi, akwụkwọ mmado na ụdị kaadị niile.
Mpempe akwụkwọ PLA
PLA bụ ụdị ahịrị ahịrị Aliphatic polyesters. Enwere ike iji PLA na ngwugwu mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, àkwá, nri esiri esi nri na anụ a mịrị amị, a nwekwara ike iji ya maka nchịkọta sanwichi, bisiki na ụfọdụ ngwugwu ndị ọzọ dị ka ifuru ọhụrụ.
JWELL PET yiri ahịrị ịghasa extrusion ahịrị
Whatsapp/Wechat/Line/Skype/Ekwentị: +86 18851210802
website:Plastic extrusion igwe, Plastic igbu ịkpụzi igwe, Plastic pelletizing compounding igwe, Plastic imegharị ihe igwe-CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
LAGHACHIAkụrụngwa - JWZ-BM30F / 160F / 230F Float Bowl Fụọnụ Nkedo igwe
OSOTEMachinery Jwell na -enyere aka rụọ ebe a na -azụ anụ mmiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ!